မောင်တို.ထကြလော. မယ်တို.ထကြလော. ရှေး သစ် ပု ဂံ ကို ရှု ကြလော. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မောင်တို.ထကြလော. မယ်တို.ထကြလော. ရှေး သစ် ပု ဂံ ကို ရှု ကြလော.
မောင်တို.ထကြလော. မယ်တို.ထကြလော. ရှေး သစ် ပု ဂံ ကို ရှု ကြလော.
Posted by Knowledge Seeker on Aug 16, 2012 in Copy/Paste |4comments
ပုဂံမြို.ဟောင်း ကား မြန်မာလူမျိုး တို.အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ၊ ဇာတိမာန် ဇာတိသွေး တက်ကြွ ဘွယ် ရာ အမျိုးသားပြယုဂ် တစ်ခုပင် ဖြစ် တော. သည်။
သို. သော် ထိုထို သော သမိုင်းအမွေအနှစ် များ ကို ထိန်းသိန်း စောင်.ရှောက် ရန် သက်ဆိုင် ရာ တို. မှ ဆောင်ရွက်နေမှု များ မှာ ကား အံ.မခန်း ဘွယ် ပေ တည်း။
များမကြာမီ လေး ကပင် မြင်းကပါ ရွာ မနုဟာ ဘု ရား အ နီး ၌ ဘု ရားအသစ်တစ်ဆု ကို တည် ဆောက်ပြီးစီး ခဲ.သည်။ မူ လ က ၎င်းနေရာ တွင် မည်.သည် သမိုင်း ၀င် ဘုရား မှ အထင်အရှား မရှိသည် ကို လူတစ်ကာ အသိ ပင်၊ ပုဂံ ချောက် သွား ကားလမ်း ဘေး တွင် အထင် အရှား ပါ ပေ။ သို.သော် ယ္ခုဘုရား အသစ် မှာ ယ္ခင် က မရှိ သည်. ဘုရား ဟောင်း ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဟန် ဖြင်. အသစ်တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ် ပေ ရာ လွန်စွာမှ ရုပ်ဆိုး လှသည်.အပြင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ သိရှိ သွားမည် ဆို သော် …..ပုဂံ၏ နိုင်းဘက်မရှိ သမိုင်း တန်ဘိုး ကိုထိခိုက် မည် အသေအခြာ ပင် တည်း….သိရှိမည်ကား မလွဲမသွေ ပင်၊ အသစ်သုတ်ထားသော အုတ်နီ မှုံ. ရောင် ဆေး မှာ အ သစ် ဖြစ် ကြောင်းသက်သေ ခံလျှက် ရှိ၏၊
တာဝန် ရှိ သူ တို. သိကြပါ ၏လော၊ သိ လျှင် လည်း အဘယ်ကြောင်. ခွင်. ပြုထားပါ သနည်း၊
ထို သို.ဆို ပြီး ကား ရှေးဟောင်း ပုဂံမြို. လော ရှေး သစ် ပုဂံမြို.လော မေး ရ ပေ တော. မည် တည်း။
ယ္ခု အခါ ရှေးဟောင် ဘုရား ပြုပြင် ရေး ကို အလွန်ပင် အားကြိုး မာန်တက် လုပ်ဆောင် နေကြ၏။ ဒါန အရေး မို. မတားလိုပါ။ သို.သော် အရိုးကို အရွက်မဖုံး ဘို. လိုပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ထောင် ချီသော ရှေးဟောင် အမွေအနှစ်များ ၏ သမိုင်း တန်ဘိုး ကို ပညာရှင် များ မှ စောင်.ရှောက် ရန် အထူး လို အပ် ပါသည်။ရှေး ဟောင် ပုံစံ ဘုရား အသစ် တည်တိုင်း ရှေးဟောင် ဘုရား မဖြစ်နိုင် သည် ကို သတိချပ် သင်.လှပါ သည်။
တခါတလေတော့ လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ။ယူနက်စ်ကို အဖွဲ့ လာတော့မယ် ကြား
လေပြေ ရှိုင်း says:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ရိုက်မည့် သရုပ်ဆောင်ကို တကယ့် ဗိုလ်ချုပ်လို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ရှိခိုးနိုင်ပါ့မလဲ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမွေအနစ်ဖြစ်သလို သမိုင်းချစ်သူ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပုဂံ။ အဲဒီ ပုဂံ(ပျူဂါမ) ဒေသကို အရောင်မှိန်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ထိန်းချုပ်စေချင်ပါတယ်… စိတ်မကောင်းပါဘူး… အလှူပြုတဲ့သူကို စော်ကားလို့ ငရဲရောက်ရင်ရောက်ပါစေ… ရှေးဟောင်းအမွေအနစ်တွေကို ထိခိုက်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုမြင်ရင်တော့… ကန့်ကွက်ချင်ပါတယ်…(တတ်နိုင်ဘူးလေ)… ရှေးပုဂံလူသားများကို မြတ်နိုးလေးစားလွန်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်မန့်မိတာပါ….
ရှးဟောင်းဘုရား ကုန်း၊ ဂမူ၊ အုတ်ပျက်ပုံများကိုလည်း
မှတ်တမ်းမှာ စေတီဘွဲ့၊ ဘုရားအမှတ်၊ ပန်းချီပုံရှိရင်လဲ
အတုဟာ အတုပါ ကိုဆီးကာ အစစ်ကိုမမှီနိုင်ပါ…။ ခုလည်း ဥာဏ်ကြီးရှင်များက ဗုဒ္ဓ ဂါယာ အတု နေပြည်တော်မှာ တည်ဖို့ကြိုးစားနေလေရဲ့…။